Nhau Kymera Ventus naApollo kubva ... Slimbook ... ehe ... zvakare | Linux Vakapindwa muropa
Kymera Ventus naApollo nhau kubva… Slimbook… hongu… zvakare
Slimbook yatotinetesa nenhau zhinji kwazvo. Taneta! Isu hatipe zvakakwana muLxA kuburitsa nhau dzakanaka nezvekambani yeSpanish. Zvinovenga kuona huwandu hwezvishamiso zvavanokanda ... Nah! Isu tinonyatsoda Slimbook uye zvese zvigadzirwa uye nhau. Iye zvino atiunzira zvinhu zvinonakidza kwazvo zvaunogona kuonawo mune maviri mega anomira (> 2m70) ayo ari kuzogadzirirwa OpenEXPO 2 ichaitirwa muLa Nave (Madrid) muna Chikumi 2019. Izvo zviripo kare! Usapotsa!
Asi kana iwe usingakwanise kuenda kana kuda kuratidzwa kwezvinounzwa nekambani yeValencian, taura izvo zvako Kymera Ventus, iyo desktop PC ye Slimbook, ichave nemhinduro. Kune mamwe ma processor eIntel uye NVIDIA GPU, uye AMD's 3rd Gen ichauyawo, iine Ryzen yakavakirwa paZen 2 microarchitecture inogadzirwa mu7nm. Asi handicho chete chinhu, bhokisi rakapa chikwama. Iye zvino yakura 3 cm pakureba, ichibva pakuva Micro-ATX kuenda kuATX. Dhizaini yayo dhizaini uye mhando… Ini ndanga ndichiti haina kuchinja, asi yakachinja. Yakavandudza! Iyo yakakwira-density aruminiyamu inoenderera, asi iyo yakajeka metra-karat divi ikozvino yadzora girazi.
Asi zvirokwazvo, asingafare nazvo, Slimbook akafunga nezvekupa dzimwe nhau kupfuura izvozvo. Uye ivo vakapawo Slimbook Apollo. Mune ino kesi iri inoyevedza AIO (All In One) linuxero Ndiwo uchava mweya wedhesiki rako kana hofisi kubva zvino zvichienda mberi. Iyo 23,6-LED IPS skrini, Intel Core i5 uye i7 processor, mukana wekumisikidza maviri akaomarara madhiraivha, imwe M.2 SSD uye imwe SATA3, kubva pa8 kusvika ku32 GB RAM, nekubatana kweWiFi, Bluetooth, USB 3.0, USB 2.0, HDMI 1.4, Audio Jack, uye RJ-45. Zvese zvine mhando zvinhu, zvakagadzirwa nealuminium alloy uye girazi.
Zvakare, isu hatisati tapedza pano, ivo vari kushandawo pa Slimbook PRO X, izvo tinotaura pano uye izvo zvavanoziva kare zvimwe zvirevo. Panguva ino, isu tinoziva kuti iyo 19 yabuda uye kuti vane chivimbo kwazvo kuti ichave iri yepamusoro yeGNU / Linux laptop kune vakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kymera Ventus naApollo nhau kubva… Slimbook… hongu… zvakare
Linux 5.2 rc5: wechishanu Regedza Musarudzo wabuda
Iyo yakagadzikana vhezheni yeOpenMandriva Lx 4 pakupedzisira inosvika